Ahoana ny fametrahana balenaEtcher amin'ny Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Ahoana ny fametrahana balenaEtcher amin'ny Debian 11 Bullseye
Alatsinainy, Novambra 29, 2021 Alarobia, Novambra 24, 2021 by Joshua James
Mametraka Dependecies ilaina
Ampidiro ny tahiry balenaEtcher
Mametraka balenaEtcher amin'ny Debian
Mamorona sary fametrahana USB miaraka amin'ny balenaEtcher
Ahoana ny fomba hitazonana ny balenaEtcher fanavaozana
Ahoana ny fanesorana (esorina) balenaEtcher
balenaEtcher dia fitaovana fampitaovana tselatra maimaim-poana sy misokatra malaza amin'ny fanoratana rakitra sary toy ny rakitra .iso sy .img ary ny lahatahiry nasiana zip ho amin'ny haino aman-jery fitahirizana mba hamoronana karatra SD mivantana sy USB flash drive. balenaEtcher dia manana fanohanana cross-platform amin'ny Linux, BSD, macOS ary Windows ary novolavolain'ny balena ary nahazo alalana tamin'ny Apache License 2.0.
Amin'ity lesona manaraka ity dia hianatra ny fomba fametrahana baelnaEtcher amin'ny Debian 11 Bullseye sy ny fomba hamoronana kapila boot fizarana Linux.
OS naroso: Debian 11 Bullseye
Update your Debian rafitra fiasana mba hahazoana antoka fa ny fonosana rehetra efa misy dia tsy misy farany:
Raha hanangana kaonty sudo efa misy na vaovao dia tsidiho ny lesonay momba ny Manampy mpampiasa amin'ny Sudoers amin'ny Debian.
Ny lesona dia hampiasa ny terminal ho an'ny fametrahana hita ao Hetsika > Asehoy ny fampiharana > Terminal.
Mba hahavitana ny fametrahana dia mila apetraka ireto fonosana manaraka ireto.
Mariho, raha tsy azo antoka, mandehana fotsiny ny baiko.
Ny asa voalohany dia ny manafatra ny tahiry ofisialy Etcher. Ho an'ireo mpampiasa Debian dia mora izany satria misy script bash noforonin'ny ekipa balena izay azo alaina sy automatique ny fanafarana.
Ao amin'ny terminal anao, ampiasao ity baiko manaraka ity mba hisintonana ny script bash.
Raha toa ka tsy mahomby ireo baiko etsy ambony ireo dia azo inoana kokoa fa ny fonosana curl tsy apetraka. Mba hamahana izany dia ampiasao ity baiko terminal manaraka ity.
Avy eo avereno ny dingana hisintonana ny script bash.
Ny baiko dia hampiditra ho azy ny baiko bash hampiditra ny script ary manafatra ny tahiry, ary raha tsy mahita ny fonosana apt-transport-https ianao dia andramo ny hametraka azy.
Rehefa vita dia tokony hahita toromarika any amin'ny faran'ny vokatra farany ianao.
Manaraka, mihazakazaka an Vaovao mifandraika amin'ny APT mba hahazoana antoka fa ny mpitantana ny fonosana dia tsy misy farany amin'ny fampidirana tahiry vaovao.
Amin'izao fotoana izao dia manana ny tahiry nafarana ianao, fotoana izao hametrahana ny rindrambaiko Etcher. Ao amin'ny terminal anao, ampiasao ity baiko manaraka ity.
Manaraka, manamarina ny fametrahana mampiasa ny baiko politika apt-cache.
Miaraka amin'ny balenaEtcher napetraka izao, ny lesona dia hampiseho haingana ny fomba hamoronana sary USB fametrahana bootable. Io no iray amin'ireo fampiasa mahazatra indrindra amin'ity rindrambaiko ity, satria fantatry ny mpampiasa Linux maro momba ny distro hopping sy ny maha-zava-dehibe ny fametrahana sary.
Ny lesona dia hamorona sary fametrahana hafa Fedora.
Voalohany, alao ny sary fametrahana .iso. Ho an'ny tranga fampianarana dia avy amin'ny Fedora Workstation's Download pejy.
Avy eo, miverina ao amin'ny rafitra Debian 11 anao, sokafy ny balenaEtcher, izay hita ao hetsika> asehoy ny fampiharana> balenaEtcher.
Ny efijery voalohany ho hitanao dia tena manazava. Iray amin'ireo antony mampalaza ity rindrambaiko ity ny fomba mora ampiasaina raha oharina amin'ny safidy hafa.
Ao amin'ny efijery fampiharana anao, tsindrio ny bokotra "Flash avy amin'ny rakitra."
Vantany vao nisafidy ny sary fametrahana tianao ianao dia tsindrio ny bokotra “Safidio ny tanjona.”
Ao amin'ny varavarankely manaraka, safidio ny USB tianao hampiasaina ho lasibatra amin'ny fampiharana Etcher handoro ny sary.
Ankehitriny mba hamaranana sy hanomboka hamorona ny kapila sary fametrahana USB bootable, tsindrio ny "Flash" bokotra.
Rehefa vita sy nahomby dia hahita vokatra mitovy amin'izany ianao.
Arahabaina, nametraka balenaEtcher ianao ary namorona ny kapila bootable USB voalohany miaraka amin'ny rindrambaiko.
Ny fomba fametrahana dia nampiasa ny mpitantana fonosana APT mba hametrahana ny rindrambaiko avy amin'ny tahiry.
Mba hanavaozana ny balenaEtcher, ampiasao ny apt-update baiko toy ny ataonao amin'ny fonosana APT na fanamarinana fanavaozana ny rafitra.
Ny tsara indrindra dia tokony hanao izany matetika ianao mba hitazonana ny fanavaozana ny rafitrao. Raha misy lisitra misy fanavaozana dia ampiasao ny apt-upgrade baiko hirosoana.
Ny fanesorana ny balenaEtcher dia dingana tsotra.
Voalohany, ao amin'ny terminal anao, ampiasao ity baiko manaraka ity.
Type Y, avy eo tsindrio ny ENTER KEY hirosoana amin’ny fanesorana.
Izany dia hanala tanteraka ny fampiharana sy izay miankina rehetra.
Manaraka, raha tsy tianao intsony ny tahiry ao amin'ny rafitra Debian anao dia ampiasao ity baiko manaraka ity.
Vitao izao amin'ny fampiasana ny baiko farany hamelombelona ny tahirinao.
Ao amin'ny lesona dia nianatra ny fomba fametrahana ny rindrambaiko balenaEtcher malaza amin'ny Debian 11 Bullseye ianao.
Amin'ny ankapobeny, ankoatry ny fanamorana ny fampiasana izay tena malaza eo amin'ny mpampiasa mahazatra, na tsara kokoa, ireo mpampiasa mifindra monina avy amin'ny Windows na macOS sambany hamorona kapila fametrahana bootable USB Linux, balenaEtcher dia manana endri-javatra lehibe toy ny tselatra voamarina, misokatra. - loharano ary tena maivana.
Ireo mpampiasa efa mandroso kokoa dia mety aleony mampiasa Rufus izay nanitatra safidy mandroso, fa ny balenaEtcher dia ambony noho ny ambiny amin'ny filana antonony.
Sokajy Debian Tags balenaetcher, Debian 11 Bullseye Post Fikarohana
Ahoana ny fametrahana / fampandehanana ny RPM Fusion amin'ny Rocky Linux 8
Ahoana ny fametrahana PyCharm amin'ny Debian 11 Bullseye